मेगा बैंकको मेघा धन्दाको मेघा पर्दाफास, खराब कर्जा प्रवाहमा मेगा अग्रस्थानमा – Avenues Khabar
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार १२:५६ मा प्रकाशित
काठमाडौं : पर्सा जिल्ला वीरगंज महानगरपालिका घर भई हाल काठमाडौं वडा नम्बर २७ बस्ने उत्तम कुमार मेगा बैंकबाट आफु पीडित भएको भन्दै न्यायको खोजीमा प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदै संचारमाध्यमसम्म आएका छन् । तर बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा ठगिएका यि सेवाग्राही आफ्नो करोडौं रकम गुम्ने भयमा भौतारिएका छन् ।
बैंकलाई एउटा सेवामुखी व्यवसाय मानिन्छ । जनताले दुःख गरेर कमाएको सम्पतीलाई सुरक्षित गर्ने अनि जनतालाई विश्वासमा लिएर बैकिङ कारोबार गर्ने काम संसार भरका बैंकले गर्दै आएका छन् । नेपालका बैंकको हकमा पनी यही आचारसंहिता लाग्छ । तर बैंकका माथिल्लोस्तरकै कर्मचारीको मिलेमतोमा बैकिङ कसुरका घटना भैरहेका हुन्छन् ।
बैंकिङकै मिलेमतोमा हुने ठगीले एकदुई जना ऋणि मात्र होइन सबै सेवाग्राही नै प्रभावित हुन्छन । हो मेगा बैंकले पनी त्यस्तै धन्दा चलाइरहेको छ । मेगा बैंकले मेघा कारोबार गरिरहेको छ । अनी मेघै निक्षेप जम्मा पनि गर्छ र त्यसैगरी मेघा ऋण दिएर मेघै ब्याज पनि असुल्छ । हो मेगा बैंकले त्यस्तै गरेको छ । मेगा बैंकले खराब कर्जा लुकाउन कारागार भित्र रहेका व्यक्ती देखी कालोसूचीमा रहेका र चेक बाउन्स मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई पटक–पटक ‘ओभर ड्राफ्ट’ दिएर ऋण नवीकरण गरिदिएको छ । यति मात्र होइन, बैंकले दुई पक्षबीच एकार्काको ऋण सकार्ने सम्झौता भइसकेको अवस्थामा मिलेमतोमा अर्को ऋणीको जग्गा धितोमा ऋण निकासा गरी जालसाजी समेत गरेको छ ।
म्हैपीस्थित एक उद्यमी उत्तम कुमार मेगा बैंककै कारण २० आनामा बनेको घर जग्गा गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । उनको जग्गा मेगाले लिलामी गर्दै छ । तर ऋण नतिरेर होइन,। मेगाको जालसाजीका कारण उत्तम कुमारले सञ्चालन गरेको ग्लोबल माउन्टेन आउटवेयर उद्योग तथा यसको नाममा रहेको म्हैपीको २० आना जग्गा घर र ८ करोड रुपैयाँ मेगाको ऋण भुमादेवी गौतमले २०७४ मंसिर २९ मा सट्टापट्टा गर्ने सम्झौता भयो । त्यसअनुसार सामाखुसीको साढे चार आना जग्गा र प्रभु बैंकमा भुमादेवीका नाममा रहेको १ करोड २१ लाख ऋण उत्तम कुमारले सकार्ने लिखित सम्झौता थियो ।
उत्तम कुमारले सम्झौताको एक सातामै भुमादेवीका नाममा जग्गा, उद्योग र ऋण हस्तान्तरण गरे । उनीहरुको रोहबरमा थियो मेगा बैंक । किनकि, उत्तम कुमार मेगा बैंकका ऋणी थिए । उनले उद्योग र जग्गा दिएर ठूलो ऋणको बोझ बिसाउन चाहेका थिए । तर प्रभु बैंकमा रहेको भुमादेवीको ऋण तिर्न उत्तम कुमारका नाममा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मेगाबाट ऋण स्वीकृत भयो। दुवै जना मेगाका ग्राहक भए, बैंकलाई ऋण सकार्ने सम्बन्धमा जानकारी गराए । तर, यही बीचमा उत्तम कुमारलाई दिने भनिएको सामाखुसीको घर जग्गा धितोमा बैंकले बदमासी गरी कर्जा थपिदियो र १ करोड २१ लाख क्रृण भएको धितोमा ३ करोड ४० बनाइदियो मेगा बैंकले ।
उत्तम कुमारले आफ्नो उद्योग, म्हैपीको २० आना जग्गामा रहेको घर र मेगा बैंकको ८ करोड ऋण भुमादेवीका नाममा सारे । त्यसपछी मेगा बैंकले उक्त जग्गा र कारोबार सट्टापट्टाबारे जानकारी हुँदाहुँदै भुमादेवीको सामाखुसीकै जग्गा धितोमै थप ऋण दियो । मेगाले जालसाजी गरी भुमादेवीको घरजग्गा धितोमा ऋण थपिदिएकाले उक्त सम्पत्ति उत्तम कुमारका नाममा अहीले सम्म पनी आएको छैन । मालपोत कार्यालयमा बुझ्दा मेगाले उक्त जग्गामा भुमादेवीलाई थपेर ३ करोड ४० लाख ऋण दिएको रहेछ । त्यसपछि उत्तम कुमार प्रहरीको अपराध महाशाखा टेकु पुगे ।
बैंक र भुमादेवीबीचको मिलेमतो देखिएपछि प्रहरीले २०७६ जेठ २९ मा ठगीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा दायर गर्‍यो । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा ग्लोबल माउन्टेन आउटवेयरको म्हैपीको ८२ र २ नम्बर कित्ता अनि सामाखुसीको २३२ नम्बर कित्तामा कति–कति ऋण छ, खुलाई पठाइदिनू भनेर सोधेकोमा झन्डै ८ करोड ऋण दिएको देखियो। अदालतको स्वीकृति लिएर प्रहरीले भुमादेवीलाई असार ८ मा पक्राउ गरी थुनामा राख्यो । त्यती मात्रै होईन उनी थुनामा रहेकै बोला असार १८ मा थप ८५ लाख रुपैयाँ ओभर ड्राफ्ट दिएर थप कर्जा नवीकरण ग¥यो मेगा बैंकले । यसलाई वित्तीय क्षेत्रको भाषामा ‘लोन इभरग्रिनिङ’ भनिन्छ । बैंकले यस्ता व्यक्तिलाई ऋण दियो, भुमादेवी र उनका श्रीमान् गुरुदत्त पौडेल जेठ २९ मै कालोसूचीमा परेका थिए । कालोसूचीमा परेपछि एकाघर परिवारका नाममा ऋण दिन र नवीकरण गर्न पाइँदैन । तर असार १९ मा एकै दिन उक्त ऋणीको खाताबाट ८५ लाख रुपैयाँ झिकेका थिए ।
मेगाकोमिलेमतो कहाँ–कहाँ छ ?
मेगाले २०७५ पुस ३० मा ब्याज लिनका लागि भुमादेवीलाई ऋण दियो। माघ २२ मा फेरि ३५ दिने कर्जा चुक्ता सूचना निकाल्यो। त्यसपछि फेरि चैत ६ गते अर्को सूचना निकाल्यो। फेरि २०७६ असार १८ मा कालोसूची र थुनामा हुँदाहुँदै ओभर ड्राफ्ट कर्जा र सम्पूर्ण कर्जाको नवीकरण गरियो। भोलिपल्टै पैसा झिक्न दिइयो । त्यसपछि भदौ १६ मा म्हैपीको जग्गा लिलामीका लागि सूचना निकाल्यो । उत्तम कुमारले जग्गा लिलामी रोक्काका लागि आफूमाथि ठगीका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निशेधाज्ञा माग गरे । अदालतले बैंकलाई सोध्दा उत्तम कुमारको बारेमा कुनै अधिकार छैन, उनी खराब ऋणी हुन् भनियो। तर, बैंकले उत्तम कुमारलाई राम्रो ऋणी हो भनेर पत्र उपलब्ध गराएको थियो । मेगासँग कुनै दायित्व नरहेका उत्तम कुमारको सम्बन्धमा अदालतलाई पनि गुमराहमा राख्यो उत्तम कुमारले बैंकलाई ऋणको किस्ता नियमित नबुझाएको भए उनको ऋण सकार्ने अर्को व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण हुने थिएन । यो पनी हेर्नुहोस
कैलाश विकास बैंकबाट ऋण लिएर धापासीको घर लिलाम गराएका पौडेलकै जग्गा आईएमई कोअपरेटिभ सर्भिसले नवलपरासी कावासोतीको जग्गा पनि लिलाम गरेको थियो । मेगामा ८५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकै बेला हेटांैडाको जग्गाधनीलाई दिएको चेक बाउन्स भएको थियो। उनले चेक बाउन्स मुद्दा खेपिरहेका छन् । भुमादेवी गौतम काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार २५ लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्न नसकेका कारण १० महीना जेल समेत परेकी थिईन भने मेगा बैंकको संरक्षणमा सर्वसाधारण ठग्दै हिडेका गुरुदत्त पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
ऋणीको घर जग्गा सस्तोमा लिने र मेगा बैंकमा अस्वाभाविक मूल्यमा धितो राखी बाउन्स चेक भिडाएर ठगी गर्दै आएका पौडेललाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले २०७७ फागुन १६ साँझ पक्राउ गरेको छ । घर जग्गा सम्बन्धी र चेक अनादरमा कयौं मुद्दा खेपेर फरारको सूचीमा रहेका पौडेल पक्राउ भने वैदेशिक रोजगार ठगी प्रकरणमा परेका छन् ।
गुरुदत्त पौडेल र भुमादेवि गौतम दम्पत्ति मेगा बैंक संग मिलेर विभिन्न व्यक्तिहरुको जग्गा जमिन सस्तोमा लिएर मेगा बैंकबाट महँगो ऋण निकाल्ने गिरोहका प्रमुख नाईके हुन । उनीहरु , हो मेगा बैंकको संरक्षणमा सर्वसाधारण ठग्दै हिडेका गुरुदत्त पौडेललाई २०६८ माघ १७ गते डेढ वर्ष कैद र २५ हजार रुपयाँै जरिवाना हुने ठहर सहितको फैसला सुनाए पछी उनी लुकीछिपी घरजग्गाको कारोबारमा संलग्न रहँदै आएका थिए । काठमाडौं, चितवन र हेटौंडालाई धन्दा गर्ने अखडा बनाएका पौडेल विरुद्ध दर्जनौं मुद्दा अहीले पनी चलिरहेका छन् । उनीहरुले मेगा बैंकसँग मिलेर एकदुई जना व्यक्तीलाई मात्रै ठगेका छैनन् ।
हो गुरुदत पौडेल र भुमादेवी गौतम एउटा मात्रै धन्दा चलाउने गिरोह भने होइनन् उनीहरु त बैंकसँग मिलेर सर्वसाधरण ठग्ने र विभिनन देशमा मानव तस्करी गर्ने गिरोह पनी हो । तर फरार रहेका गुरुदत्त पौडेललाई आईतबार मात्रै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआईबिले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई डेढ वर्षको लागी सुन्धारा स्थित सेन्टर जेल चलान भईसकेका छन । तर पक्राउ पर्नु भन्दा केही दिन अगाडी मात्रै उनले खबर प्रसारण नगर्न भन्दै टेलिफोन मार्फत हामीलाई समेत यसरी धम्की दिएका थिए ।
मेगा बैंकको बदमासीको एकपछि अर्को फाईल खुल्न थाले पछी एकै व्यक्तिलाई घरी ऋण तिर्न आउनु पर्ने भनेर पत्रिकामा नै सूचना निकालेको छ भने तत्कालै त्यही व्यक्तिलाई ऋण दिएर जनताको रगत पसिनाको कमाईको रकमको दोहन गरेको रहस्य बाहीरिन थालेको छ । जनताको रकम ठग्ने मतियारको रुपमा चिनीएको सफल जग्गा बिचौलियाद्वय भूमादेवी गौतम (पौडेल) र उनका श्रीमान् गुरुदत्त पौडेलको नाममा घरी घरी ऋण दिने र त्यो ऋण तिर्न आउँनु भन्दै सूचना निकाल्ने गरेको प्रमाणहरु फेला परेका छन् ।
हुन त पौडेल दम्पत्तीसँग बैंकले अरु पनि शंकास्पद कारोबारहरु त गरेको छ नै तर यहाँ उल्लेख गर्न लागिएको कारोबार भने अलि अनौठो खालको रहेको छ । १२ दिनभित्रमा दुई पटकसम्म ऋण दिने र ऋण दिएको २२ दिनभित्रमा तुरुन्त ३५ दिने सूचना निकाल्ने गरेको तथ्यले पुष्टि गरेको छ । हो यसरी मेगा बैंक संग मिलेर घर जग्गा ठगी गर्ने गिरोहका प्रमुख नाईके गुरुदत पौडेललाई कर्जा नतीरेको भन्दै बैंकले सुचना निकालि रहयो तर उस्लाई ऋण पनी दिईरहयो मेगा बैंकले हामीले यो खबर प्रसारण गर्ने थाहापाय पछी मेगा बैंकले कानुनी सल्लाहाकार डिल्लीराम श्रेष्ठ मार्फत हाम्रो खबर कर्ममा कालो पोत्ने प्रयास ग¥यो र रकमको प्रलोभन समेत देखायो ।
हो तिनै गुरुदत्त पौडेल र उनकी श्रीमती भूमादेवी पौडेललाई बिचौलिया बनाएर घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेपछि मेगा बैंक धरासायी बन्दै गएको छ । मेगा बैंकको अवस्था दिनप्रतिदिन समस्यामा देखिएको छ । बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणले समेत बैंकको अवस्था राम्रो छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को दोस्रो त्रैमास अर्थात ६ महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको लगानीमा रहेको ठूलो रकम उठ्न सकेको छैन । बैंकको निस्कृय कर्जा बढ्दै गएको ६ महिनाको रिपोर्टले देखाएको छ । बैंक आफैले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार निस्कृय कर्जा सुधार हुनु पर्नेमा उल्टै बढेको छ । बैंकहरुका लागि निस्कृय कर्जा बढ्नु राम्रो होइन । कुनै व्यक्ति वा फर्मले ऋण लिएर तिरेनन् भने अर्थात बैंकको ऋण डुब्ने देखिएयो भने त्यो कर्जा खराब कर्जामा गणना हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंकको खराब कर्जा अनुपात भने बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को दोस्रो त्रैमासमा १.४९ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बढेर १.७१ प्रतिशत पुगेको छ । त्यतिबेला बैंकको राम्रो अवस्थामा भने छैन । बैंकले सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ ९७ पैसा, प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय ३१ रुपैयाँ ६४ पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात १५.८० गुणा रहेको छ बैंकले यस अवधिमा १ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब २३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
चुक्ता पूँजी १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र रिटेन्ड अर्निङ्ग १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै बैंकको वितरण योग्य मुनाफा ६८ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । हाल गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ रहेको कर्जा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर यस मध्ये १ प्रतिशत भन्दा धेरै अर्थात १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा खराब कर्जा पुगेको छ । यो तथ्यांक हेर्दा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा ऋण जोखिममा परेको पुष्टि हुन्छ ।
बैंक सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले सही तरिका अपनाउन नसकी लोभ लालच राख्यो भने के हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण निजी क्षेत्रको वित्तीय संस्था मेगा बैंकलाई हेरे काफी हुन्छ । नेपालको एक मात्र महिला सिईओ भएको मेगा बैंक पनी यती बेला खराब कर्जा दिने बैंकको सुचिामा अग्रस्थानमै छ । यो प्रकरणका फेहरिस्त हेर्दा लाग्छकी मेगा बैंकले गलत नियत बोकेका नामुद भूमाफियाहरुलाई साथमा लिएर विभिन्न निर्दोष व्यक्तिहरुलाई दुख दिइरहेको छ ।
तपाईले सामान्य अर्थमा बुझ्नुस तपाईलाई जग्गा किन्नका लागि ऋण चाहिँयो बैंकले कति देला ? बैंकले तपाईको लिन चाहेको जग्गाको मूल्यांकन गर्छ र त्यसको ४० प्रतिशत बैंकले ऋण दिन्छ । बाँकी सबै रकम तपाई आफैले जुटाउनु पर्ने हुन्छ । अर्थात ल्याण्ड पर्चेज ऋण तपाईले ४० प्रतिशतमात्रै पाउनु हुन्छ । अन्य शिर्षकमा दिने कर्जाहरुमा पनि त्यस्तै हुन् । धितो जति छ त्यसको केहि प्रतिशत बैंकहरुले जोखिम मूल्यांकन गरेर लगानी गर्छन । जति धितो छ त त्यो भन्दा धेरै भने बैंकले लगानी नै गर्दैनन् । तर पहिलो महिला सीईओ भएको भन्दै प्रचारमा रमाएको मेगा बैंकले ऐन नियमको खिल्ली उडाएर निकै मनपरी गरेको छ ।
पहिले पनि बारंबार बैंकिङ कारोबार गरेका उनीहरुले बैंकका हाकिमहरुलाई रिझाउँनु पर्ने आवश्यकता ठान्दैनन् । पहिले जे बानी लागेको थियो त्यही अनुसार हुने नै गर्छ उनीहरुको धन्दा बैंकमा सामान्य प्रकृया सुरु गर्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य आर्थिक नियमहरुको पालना गर्नु पर्ने आवश्यकता ठान्दैन मेगा बैंकले । नेपाल राष्ट्र बैंककै नीति निर्देशनको अधिनमा रही जनताले दुःख गरेर कमाएर बचत गरेको रकमको सुरक्षा गर्न स्थापित मेगा बैंकले कानूनी प्रक्रियाहरुको पालना गर्नु हो तर त्यस्तो देखिदैन । पिडीत न्यायको खोजिमा अडाअदालत पुग्छन । तर उनले अहीले सम्म न्याय पाएका छैनन् । बैंकीक कारोबार भएका कारण बैंकहरुलाई नियमन गर्ने प्रमुख निकायमा यसरी खराब कर्जा दिने बैंकलाई के कारवाही हुन्छ भन्न्ने प्रश्न बोकेर हामी नेपाल राष्ट्र बैंक पनी पुगेका थियौ ।
प्रहरी हिरासतमा रहेकी भुमादेवी र कालोसूचीमा रहेका गुरुदत्तलाई त्यसरी जनताको रगत पसिनाले कमाएको रकम नियम विपरित ऋण दिएर लाभ कति लिएका छन । आफूले गरेको कालो कर्तुतको जवाफ दिनै पर्छ ।
नेपालीमा एउटा उखान छ चोरको खुट्टा काट भन्नासाथ आफैं तान्छ हो ठ्याक्कै यो उखानको झल्को दिने गरी मेगा बैंकमा काण्ड मच्चिएको छ । यतीबेला । अनि खुट्टा तानेर आफ्नो परिचय दिने काम भएको छ । मेगा बैंकको । जनताले खाई नखाई दुख गरेर जोगाएको पैसा सुरक्षित होला भनेर बैंकमा राख्दा कसरी दोहन हुँदो रहेछ भन्ने यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस बैंकका काण्डहरु धेरै छन् । ती काण्डहरुको हामी एक÷एक फाईल खोल्दै जानेछौं ।
१८ चैत्र २०७६, मंगलवार ०८:१९
एजेन्सी : कोरोना भाइरसको महामारी उच्च…
२० मंसिर २०७७, शनिबार १९:३१
काठमाडौं: यस वर्षको मिस नेपालको उपाधि…
एजेन्सी : कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप लगाएका…
भागरथीको बलात्कार र हत्यापछिको तरंग, नेपालमा बलात्कारको डर लाग्दो तथ्यांक
८ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:१४
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीको…
काठमाडौं : नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको दिल्ली भ्रमणको क्रममा माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन…
नेपाल कोरोनाको अति जोखिम युक्त मुलुकको सुचीमा, नियन्त्रणको प्रयास सुन्य
काठमाडौं । कोरोना भाइरल विश्वभरि समस्याको रुपमा देखा परेको छ। नियन्त्रणका लागि गरिएको प्रयास असफल…